SANTOSH PAUDEL'S BLOG : May 2012
नेपालीहरुमा खुशिको सिमा थिएन । जताततै हर्सोल्लासको नारावाजी र उत्साह थियो । कोही 'भट्टराई' जिन्दावाद भन्थे, कोही 'मने' जिन्दावाद त कोहि 'काले', 'गोरे', 'शेर' जिन्दावाद !! शहरको चोक, चोक, गल्ली, गल्ली जताततै मानिसहरुको हुल थियो । हुलहरुमा उपस्थित सम्पुर्णले एक आपसमा खुशि साटासाट गर्दै थिए । भावनात्मक सम्बन्धलाइ अझ प्रगाढ बनाउँन एक आपसमा चुम्बन गर्दै, हाम्रो कुनै 'जात' छैन, विमती र झगडाको 'गुट' छैन । हामी नेपाल राष्ट्र आमाको पुत्र-पुत्री 'नेपाली' हौँ । संसारले चिन्ने वीर 'नेपाली' हौँ । हामी सबै 'नेपाली' हौँ । हाम्रो स्वतन्त्र सिंगो अखण्ड राष्ट्र 'नेपाल' हो- भन्दै ठुला ठुला आवाज घन्किरहेको थियो ।
कोही भन्दै थिए-"हामी 'जात' लाई हतियार बनाई 'रक्तपात'" गराउन चाहान्थ्यौँ । भाईचारा, बन्धुत्वमा फाट ल्याउँन चाहान्थ्यौँ । हाम्लाई एकता र समताबाट भाज्य गर्ने जातीय राज्य, जातीय संघियता चाहिन्न, हाम्लाई केवल एक सुत्रमा आवद्ध गराउने, नेपालीपन, नेपाली वहादुर, वीर गोर्खाली साथै सिंगो राष्ट्र 'नेपाल' र नेपालीहरुको भलो हुने, विकास हुने, समृद्धि र सम्पन्नतातिर लम्काउँने, आपसी सद्भाव र समन्वय हुने, विखण्डन होइन सिंगो राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने 'संविधान' चाहिएको थियो, जुन आज हाम्ले प्राप्त गर्यौ । झण्डै, झण्डै राष्ट्र अगुवाईहरुले यति सुन्दर राष्ट्र नेपाल र हामी नेपालीहरुलाई युगाण्डा र ईथियोपियाको आलो रगत चाट्ने रणभूमि बनाउँनै थालेका थिए तर व्यक्तिगत स्वार्थ, दलिय स्वार्थ र राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि रहेर नेपाली भावनालाई समेट्ने जन "संविधान", जनताको संविधान बनाए । संवाभित मार, काटको बन्द गरे । नेपाली दाजुभाइदिदीवहिनीहरु ! यिनीहरु पनि त नेपाल राष्ट्रको सन्तान हुन् । अन्तिम घडिमै भए पनि अन्तत्वगोत्वा राष्ट्रप्रेम र देशभक्ति देखाए । नेपालीजनताप्रति झल्काएको प्रतिवद्धता पुरा गरे । इतिहासको पानामा ६०१ को नाम सझिनेछँ । राष्ट्रको लागि, नेपाली जनताकालागि यिन्ले तिर्नै नसक्ने गुण लगाए । भन साथिहरु ! "हाम्रो नेता, हाम्रो देश" प्राण भन्दा प्यारो छ । "नयाँ संविधान" जिन्दावाद !, "नयाँ संविधानलाई" स्वागत छ । "जय नेपाल" जिन्दावाद ! "जय नेपाली" जिन्दावाद !
हुनपनि नेपाली राजनीतिको लामो संक्रमण कालपछि नेपाली जनताले चाहे जस्तो, देशको विकासमा तीव्ररुप छाँउने खालको, नेपाली जनताले गर्वको साथ "सय थरि फुलका हामी एउटै माला नेपाली" व्यक्त गर्ने स्वतन्त्र आवास को त्यो अविष्मरणीय दिन, ऐतिहासिक दिन, इतिहासले भुल्न नसक्ने दिन २०६९ जेष्ठ १४ गते बेलुकी ८:३० मा समग्र नेपाली जनता (४ वर्ण, ३६ जात, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला, ५ विकास क्षेत्र, हिमाल, पहाड, तराई) लाइ समेट्ने "संविधान" बनेको थियो । त्यो हर्सोल्लासमय दिनको बारेमा म संग पनि व्यक्त गर्ने कुनै शब्द थिएन, केवल अपार खुशिको समुन्द्र थियो । म डुब्दै त्यो समुन्द्रको गहिराइमा मेरो भविष्य, सम्पुर्ण नेपालीहरुको भविष्य, उनीहरुको आर्थिक उन्नतीको स्तर, एकआपसको सदभाव, प्रेम, विकास र सुन्दर देश "नेपाल" र "नेपाली" खोज्दै थिए । अचानक कसैको थप्पडमा विउझिँदा केवल त्यो त वानेश्वरको पिपलको रुखमा अढेस लाग्दा देखिएको सपना पो रै'छ ।
Posted by Santosh Paudel at 1:59 AM No comments: Links to this post
Posted by Santosh Paudel at 3:31 AM 1 comment: